R/wasaaraha Ciraaq oo sheegay in is faham hordhac ah laga gaaray wadahadalladii udhaxeeyay Iiraan iyo Sacuudiga.
Sunday May 01, 2022 - 12:31:53
Wadahadalladii usocday dowladaha Sacuudiga iyo Iiraan ayaa heer gaba gaba ah maraya iyadoona labada dowladood ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ay isku maandhaafsanyihiin.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Shiicada Iiraan ayaa usheegay wakaaladaha wararka in wadahadallada ay lagaleen Sacuudiga is faham hordhac ah laga gaaray.
Wuxuu carabaabay in Sacuudiga ay isla garteen in hanaan wadadahadal lagu dhammeeyo khilaafka udhaxeeya labada dowladood islamarkaana laga wada shaqeeyo sidii dib loogusoo celin lahaa xiriirkii dib lumaasiyadeed.
Aala Sacuud iyo Iiraan ayaa lafilayaa in si tartiib tartiib ah ay ubilaabaan furista qunsuliyado kadibna waxaa xigi doono in safiirro ay is dhaafsadaan balse wadahadalladii ka dhacay magaalada Baqdaad laguma sheegin sida laga yeelayo dagaalka ka holcaya wadanka Yemen oo ah waxa ugu weyn ee ay isku khilaafsanyihiin labadan dowladood.
Mustafa Alkaadimi oo ah R/wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay sii wadi doonto marti gelinta wufuudda ka socoto labada dhinac, ilo wareedyo diblumaasiyadeed ayaa sheegaya in mas'uuliyiin sare sare oo ka socotay Riyad iyo Tahran ay socdaal qarsoodi ah ku tageen magaalada Baqdaad halkaas oo ay ku yeesheen kulamo maalmo socday.
Dowladda Shiicada iiraan ayaa hub casri ah siisay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta waxayna maleeshiyaadkan awood usheeyeen in ay diyaarado Drones ah iyo sawaariikhda Ridada fog ku garaacaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Sacuudiga iyo xarumaha shirkadaha shidaalk.
Weerarkii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ayuu Sacuudigu lakulmay sanadidi 2019 kolkaas oo laburburiyay keydadka shidaalka shirkadda ARAMCO waxaana weerarkaas lagu eedeeyay dowladda Iiraan.
Al Shabaab oo sheegay in ay qarax ku weerareen kolonyo kusii jeedday Teendhada Afisyooni.
Saciid Deni oo qaatay Shahaadada Musharaxnimada iyo Wasiir Xasan Abgaal oo Gaalkacyo gaaray.